यि हुन सबै भन्दा राम्रो नाच्ने १० नेपाली चलचित्र नायिकाहरू…..(हेर्नुहोस् पुरा बिवरण) - Nawalpur Dainik
यि हुन सबै भन्दा राम्रो नाच्ने १० नेपाली चलचित्र नायिकाहरू…..(हेर्नुहोस् पुरा बिवरण)
February 8, 2021 by Nawalpur Dainik
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा केही यस्ता नायिकाहरू पनि छन् जुन नायिकाहरू एकदमै सर्वगुण सम्पन्न रहेका छन् । एउटा राम्रो नायिकामा अभिनय र आवाज सँगसँगै उसको नृत्य पनि राम्रो हुनु जरुरी छ । नेपाली चलचित्रका अधिकांश गीतहरूमा कविराज गहतराजको कोरियो ग्राफ देखिन्छ ।
लोकप्रिय कोरियोग्राफर कविराजले थुप्रै नायिकाहरू सँग थुप्रै गीतको कोरियो ग्राफ गरिसकेका छन् । तर कविराज चलचित्र क्षेत्रको गतिविधि बाट सन्तुष्ट चैँ छैनन्। आज हामी नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा सबैभन्दा राम्रो नाच्ने १० नायिकाको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ ।
१० केकी अधिकारी केकी अधिकारी नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी निकै चर्चित र व्यस्त नायिका हुन् । उनी राम्रो अभिनय मात्र नगरेर निकै राम्रो नाच्छिन् पनि । केकी अधिकारीले डान्स गर्दा निकै राम्रो एक्सप्रेशन दिने गरेकी छिन् । जसले दर्शकलाई मोहित बनाउने गरेको छ ।
९ रेखा थापा रेखा थापा कुनै समयकी चर्चित नायिका हुन् । रेखा पनि अभिनयमा मात्र नभएर डान्समा पनि पोख्त छिन् । उनले जस्तो खालको डान्स पनि सजिलै गर्न सक्छिन् । त्यसैले उनलाई राम्रो नाच्ने नायिकाको रुपमा हेरिन्छ ।
८ जसिता गुरुङ जसिता गुरुङ नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा आएको धेरै समय भएको छैन । तर उनको फ्यान फलोइङ भने निकै राम्रो रहेको छ । जसिता गुरुङ पनि निकै राम्रो नाच्ने अभिनेत्रीमा पर्छिन् ।
७ बेनिशा हमाल बेनिशा हमाल सानैदिन नाच्नमा पोख्त थिइन् । उनलाई शास्त्रीय नृत्य गर्न खुब मनपर्छ । बेनिशाले धेरै शास्त्रीय नृत्य गर्ने गरेकी छिन् । त्यसबाहेकका अरु डान्स फर्म पनि उनले गर्न सक्छिन् ।
६ साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह साम्राज्ञी निकै राम्रो नाच्छिन् । त्यसबाहेक उनको एक्सपेशनले सबैलाई भुतुक्कै बनाउँछ । साम्राज्ञी पनि सबै खालका डान्स गर्न सक्ने अभिनेत्रीमा पर्छिन् ।
५ शिल्पा पोखरेल म्यूजिक भिडियो हुँदै चलचित्रमा आएकी नायिका शिल्पा पोखरेल पहिलेदेखि नै नाच्न सिपालु थिइन् । डान्स गर्दा उनको एनर्जी निकै राम्रो रहेको हुन्छ ।
४ स्वस्तिमा खड्का स्वस्तिमा खड्काको कुरा गर्ने बित्तिकै सबैलाई सुरुमा कुटु मा कुटु गीत नै याद आउँछ । उनले कुटु मा कुटु गीतमा निकै राम्रो नाचेकी पनि थिइन् । त्यहाँ बाट नै उनले राम्रो नाच्छिन् भन्ने कुरा थाहा हुन्छ ।
३ निता ढुङ्गाना निताको डान्सको फ्यान निकै रहेका छन् । उनले आफ्नो डान्सले नै दर्शकको असाध्यै माया पाएकी छिन् । उनको डान्समा पनि एक्सप्रेशन सबैभन्दा राम्रो हुन्छ ।
२ आँचल शर्मा नायिका आँचल शर्माले थुप्रै डान्सिङ गीतहरुमा नाचिसकेकी छिन् । उनले पनि सबै खालका डान्स गर्न सक्छिन् । उनको डान्सको फ्यान धेरै रहेका छन् ।
१ प्रियंका कार्की नेपाली चलचित्र क्षेत्रमाा सबैभन्दा राम्रो नाच्ने नायिकाको लिष्टमा प्रियंका कार्कीको नाम अग्रस्थानमा आउँछ । प्रियंका निकै राम्रो नाच्ने गर्छिन् । उनी एक रियालिटी शो को जर्ज समेत बनिसकेकी छिन् । उनले हरेक प्रकारका डान्स गर्न सक्छिन् ।
Posted in पत्रपत्रिकाबाट, हेडलाइन
Prevकरिश्मा ढकालले यस्ता तस्बिर सर्बजनिक गरेपछि…..(३० तस्बिर सहित)
Nextयुबती हरुले ब्लाउजभित्र पैसा घुसाएर किन राख्छन् ? तपाईलाई थाहा छ ?
Коли Вчені Відкрили Цю 2000 річну Знахідку, Вони Знайшли те, Що Вразило Всіх.
5 найкрасивіших аеропортів світу зверху. (Відео)
Топ5найстаріших культуристів у світі. (Відео)
5 неймовірних досягнень людської витривалості. (Відео)
Топ5найвпливовіших людей світу. (Відео)